Fepetra noraisina ho fisorohana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Marihina fa tsy miova ny « Calendrier scolaire 2017-2018 » na eo aza ny zava-misy.
Fepetra izay mihatra amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana
1- IREO CISCO VOAKASIKA
- Fanadiovana faobe ny sekoly rehetra ao amin’ilay ZAP na CISCO misy ny marary
- Fandrarahana fanafody ireo sekoly rehetra ao anatin’ny ZAP na ny CISCO
- Fanakatonana ny sekoly ao anatin’ny 3 andro aorian’ny fandrarahana fanafody.
2- FEPETRA HO RAISINA AMIN’NY HERINANDRON’NY FAHA 9 OKTOBRA
Satria ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena dia miaro tanteraka ireo ankizy ary mitandro toy ny anakandriamaso ny fahasalaman’izy ireo dia hatao “Semaine d’observation” ny herinandron’ny faha 9 oktobra.
Tsy mianatra noho izany ireto CISCO sy ZAP ireto mandritra iny herinandro ho avy iny:
- CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA MANONTOLO
- CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO:
- CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO:
- CISCO AMBOHIDRATRIMO:
- CISCO MANJAKANDRINA:
- CISCO TOAMASINA I MANONTOLO
- CISCO TOAMASINA II:
- CISCO FENERIVE EST :
- CISCO MAHAJANGA I MANONTOLO
Cellule riposte / MEN
Marihina fa nisy fiovana intelo miantoana ity fanambarana ity.
Tsara raha manaraka ny vaovao ampitain'ny ministera isika mpaky eto.